Unboxing yeParrot Zik 2.0 engummangaliso nguStarck | Iindaba zeGajethi
Unboxing yeParrot Zik 2.0 engummangaliso nguStarck
UJuan Colilla | | Izixhobo, elektroniki, ngokubanzi, Iziphaluka, Abadlali
Sityhila ibhokisi ye IParrot Zik 2.0, Izigcina-ntloko ezikumgangatho ophezulu ezingasenzi nto ngaphandle kokusothusa, ukusukela mhla sizikhupha ngaphandle kwebhokisi de sizinxibe sizame ngazo.
Isikhwenene kutshanje saziwa ngomsebenzi waso oqaqambileyo ekuyileni nasekuthengiseni iidrones ezingezizo ezoluntu, izixhobo zolawulo ezikude ezihlekisa abancinci nabadala, nangona kunjalo akufuneki silibale ukuba ngenye imini yayisaziwa ngomsebenzi wayo wokwenza amaqela «izandla simahla» kunye nomsindo.
Ezi helmethi zibonisa amava afunyenwe kuyo yonke loo minyaka, zibonisa umgangatho ngaphandle kokuzikhupha ngaphandle kwebhokisi, emva koko unokujonga uyilo kunye nemisebenzi yazo.
1.1 Ukuchukumisa ipaneli yokulawula
1.2 Ukuchongwa kwentloko
1.3 Ukucinywa kwengxolo okusebenzayo (ilungelo elilodwa lomenzi wechaphaza)
1.4 Imo yesitalato
1.5 Ukwahlula indawo
1.6 HD umnxeba
1.7 Ukusebenza okungenasiphako ngaphandle kweengcingo
Njengoko unokuba ubonile kwividiyo, ezi helmet zipakishwe yimisebenzi ebenza ukuba babalasele njengoko bekhethekile, ndingathanda ukuzijonga zonke nzulu kwabo bangayibonanga ividiyo okanye abafuna ukungena nzulu kuzo ke ngoku ndiza kuhamba:
Ukuchukumisa ipaneli yokulawula
Kwifowuni efanelekileyo ekunene sinayo umphezulu capacitive ubungakanani obukhulu obusivumela ukuba senze izijekulo ezithambileyo kuyo, ngezi helmethi, sithumele iiodolo kwizixhobo zethu (i-audio emitter), imizekelo yazo zezi zilandelayo:
Chukumisa indawo esembindini ukuze unqumame / udlale iaudiyo.
Swayipha phambili uye kwingoma elandelayo / umva uye kwingoma yangaphambili.
Gcina umnwe wakho uchukumisa indawo esembindini yentloko ukucela umncedisi onyanisekileyo (uSiri kwi-iOS, uGoogle ngoku, iSamsung Voice, okanye nantoni na oyabele kwiAndoid)
Ukuba bayakutsalela umnxeba, uyakubamba nje, ukuba ubambe imizuzwana emi-2 umnxeba uyaliwe.
Ukulawula ivolumu, swayipha phezulu (ukunyusa) okanye ukwehla (ukunciphisa).
IParrot Zik 2.0 inezivamvo ezahlukeneyo ezinceda iminqwazi yazi ukuba zihleli entlokweni yakho okanye ukuba uzikhuphile, ngale ndlela ukuba umntu uthetha nawe okanye ufuna ukwenza nantoni na kwaye kufuneka uyikhuphe, kuya kufuneka uyithobe entanyeni okanye uyikhulule ukuze umculo ume kancinci yeyakho, nje ukuba uzibuyisele, umculo uya kuwudlala ngokuzenzekelayo ukusuka apho uyeke khona.
Ukucinywa kwengxolo okusebenzayo (ilungelo elilodwa lomenzi wechaphaza)
Zintandathu kwii-microphone ezakhelweyo nikela umzamo wabo wokubamba izandi zangaphandle ezinokuthi ziphazamise amava akho esandi, zivelise amaza wesandi aphikisayo endlebeni yakho ukuze ungaqondi ukuba zenzekile, ngale ndlela umamela umculo owuthandayo okanye ilizwi lomnxeba ngaphandle Indalo iyaphazamisana nomsebenzi wakho, ukwahlukaniswa okwenziwe kakuhle kakhulu endimqhwabel 'izandla uParrot.
Imowudi enye ngaphakathi «kokurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo» umsebenzi okwabanelungelo elilodwa leParrot ngu «Indlela yesitalato», ngale ndlela sinokuyonwabela ukucinywa kwengxolo nokuba sezitalatweni, inkqubo ekrelekrele iyayikhathalela qaphela izandi ezibalulekileyo Umsebenzisi, njengelizwi lomntu osondeleyo kunye nokwandisa kunye / okanye ukuvelisa kwakhona ngokuchanekileyo ukuze wena, ngelixa unxibe ii-headphone kwaye umamele umculo, umve kakuhle omnye umntu.
IParrot Zik 2.0 inesakhono sokwenza oko lungelelanisa umsindo ngokweepateni ezikhoyo kwisicelo esisemthethweni, ukukwazi ukukhetha indawo yomthombo wesandi kwaye uxelise isandi seholo enkulu yekonsathi, iklabhu yeJazz, igumbi eliqhelekileyo kunye negumbi elithuleyo.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, IParrot Zik 2.0 yinkqubo epheleleyo engenazandla yesizukulwane samva nje, inkqubo eyenzekayo ukusukela oko kufunyanwa umnxeba iyamangalisa; Siqala ukufumana umnxeba, ngalo mzuzu, ukuze singayikhuphi i-smartphone epokothweni, iminqwazi ifunda uluhlu lwakho lokunxibelelana kwaye ichonge ukuba ngubani okubizayo kwaye ufunde igama laloo mntu ngokuvakalayo nangokucacileyo kuwe. Unokwenza isigqibo sokuba uyayithatha okanye hayi.
Kodwa ayipheleli apha, masithi uyayithatha, ii-microphone zayo ezisibhozo zichithe zonke iinzame zazo kule fowuni, ngaxeshanye zithatha ilizwi lakho kunye nengxolo enokuthi iphazamise umnxeba, ngale ndlela zimbini izinto ezifezekisiweyo, eyokuqala Kungokuba ilizwi lakho livakale licacile kwaye liyindalo kwaye okwesibini kukuba ingxolo yangaphandle ayizukuchaphazela umnxeba ukuze ube uwedwa, wena kunye nomntu onxibelelana naye. Njengokuba konke oku bekungonelanga, banesenzi sokuqhuba samathambo, ngalesi sixhobo inoxanduva lokufumanisa ukungcangcazela komhlathi wakho xa uthetha, uya kuzibuza ukuba kutheni, kuba ilula kakhulu, enkosi kule Parrot Zik 2.0 inako thintela amaza asezantsi elizwi lakho, ohambisa umgangatho, isandi sendalo nokuba kunomoya.
Ngayo yonke le nto uyakuva ukuba lomntu uthetha naye ulapha ecaleni kwakho.
Ukusebenza okungenasiphako ngaphandle kweengcingo
Iparrot iZik 2.0 iyahambelana nazo zonke iifowuni ezikhoyo, zinethegi ye-NFC kwibala lendlebe lasekhohlo ukulungiselela ukubhangqwa kunye nonxibelelwano lweBluetooth 3.0 yothumelo lwengcingo olungenazingcingo, ngale ndlela sinokuwonwabela umculo wethu ngaphandle kwamaqhina. Awunayo ibluetooth? Sukuba nexhala, banesidibanisi sejack se3mm (iipali ezintathu), eyona nto ibekwe emgangathweni ngokweaudiyo ukuqinisekisa ukungqinelana okungalinganiyo.
IParrot Zik 2.0 ineendlela ezi-3 ezahlukeneyo eziya kuqinisekisa ukuzimela okwaneleyo kule meko, nokuba uza kuhamba okanye uhambe ngenqwelomoya omde:
Imowudi yesiqhelo: phezulu Iiyure ze6 Ukudlala kwakhona kweBluetooth nge-ANC (ukurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo) kunye nokwahlulahlula indawo okwenziweyo
Imowudi "Eco": phezulu Iiyure ze7 Ukudlala ngokulalelwayo ngongeniso lwejack kunye ne-ANC kunye nokwenziwa kwendawo kwenziwe kusebenze.
Imowudi yenqwelomoya: phezulu Iiyure ze18 ukudlala ngokulalelwayo ngejack jack ene-ANC yenziwe.
Ukongeza kuyo yonke le misebenzi, usetyenziso olukhoyo kwiAppStore nakwiGoogle Play apho sinokuthi siqwalasele ukuthanda kwethu kwaye sisebenze / sisebenze ngokuxhomekeke kwiimfuno zethu, sijamelene nerhamncwa lokwenyani ngokubhekisele ekuvelisweni kwakhona. ngaphezulu kwaso nasiphi na isigcina-ntloko sophawu lweBeats kwaye ukuphakama kwama-greats afana noBose nabanye, ngaphandle kwamathandabuzo ephepheni bathembisa okuninzi, ngoku kufuneka sibonile ukuba baziphatha njani ebomini bokwenyani, esiza kukuzisela kungekudala Uhlalutyo lwevidiyo kule bhlog kwaye ndiza kuthumela kuyo ikhonkco kweli nqaku, hlala ubukele kule veki izayo!
Kulabo bangafuni ukulinda, IParrot Zik 2.0 Sele zithengiswa ngemibala: emnyama, emhlophe, i-mocha, eluhlaza okwesibhakabhaka, iorenji kunye notyheli. Ukufumana eyakho, kufuneka uye kwivenkile esemthethweni yeParrot online, apho zifumaneka khona nge- € 349.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » Unboxing yeParrot Zik 2.0 engummangaliso nguStarck
Izixhobo ezi-5 zokujonga ukuthembeka kweeCD zakho okanye iiDVD kwiiWindows
Amaqhinga: Uyenza njani into yokuba ucoce kwaye ukhawuleze ukuqala kweWindows